प्रचण्डले कडा आन्दोलनको घोषणा गरेसँगै नेपाल यति दिनसम्म बन्द हुँदै! – PathivaraOnline
Home > समाचार > प्रचण्डले कडा आन्दोलनको घोषणा गरेसँगै नेपाल यति दिनसम्म बन्द हुँदै!
काठमाडौँ / नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुषपकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद वि’घटनको कदमवि’रुद्ध क’डा आ’न्दोलन गर्ने घो’षणा गरेका छन्। आफू पक्षीय केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले संसद पुनर्स्थापनाका लागि क’डा सं’घर्ष गर्ने र नेपाल ब’न्दसम्म पनि हुनसक्ने उल्लेख गरे। ‘आ’न्दोलनमा नेपाल ब’न्दसम्म पनि हुनसक्छ। क’डा नै हुन्छ। साहस गरौं,’ उनले भने, ‘दिमागमा कुनै बाेझ छ भने ह’टाइदिनु।
आ’न्दोलन गर्ने हो। आफ्नो प्रदेशमा अब कयौं गुणा बढी सक्रिय र त्या’ग गर्नुपर्नेछ।’ आफूहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट साढे दुई वर्षसम्म अ’पना सहेको समेत उल्लेख गरे। आफूहरूले ओलीवि’रुद्ध राजनीतिक प्र’तिकार गर्ने निर्णय गरेर ठीक गरेको समेत बताए। ‘साढे दुई वर्षका अ’पमानपछि स’त्यलाई स्थापित गर्ने साहस सचिवालयले गरेर ठिक गरिएछ। म’न्द वि’ष पि’लाउन खाेजिएकाे रहेछ,’ उनले भने। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बु’र्जुवा भएको लक्षित गर्दै बु’र्जुवाहरू श’ब्दजालमा सि’पालु हुने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले श’ब्दजाल वा’कजालमा पा’रेर संसद् वि’घटन गरेको समेत उल्लेख गरे।
वि’कल्प लिएर आउँछु भन्दाभन्दै पनि उनले आफूलाई ओलीले समय निदिएको उनको भनाइ छ। ‘५ मिनेटमा वि’कल्प लिएर आउँदैछु दुई वि’कल्प थिए भन्दा ह’तारहतार भं’ग गरियाे। याे सामान्य कुरा छैन,’ प्रचण्डले भने, ‘श’ब्दजाल, वा’कजाल छ। ब्रुजुवा (ओलीलाई ल’क्षित गर्दै)हरू श’ब्दजालमा सि’पालु हुन्छन्। स’र्वहारा (आफूहरू)काे मन इ’मानदार हुन्छ‍।’ उनले क’डा आ’न्दोलनमा उ’त्रन समेत सबैलाई आ’ह्वान गरेका छन्। ‘हामीले आ’न्दोलन अलि क’डा गर्नुपर्नेछ। क’डा आ’न्दोलनमा जान सकेनौं भने संविधानमा छैन भनेर पुनर्स्थापना भइहाल्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘पहिलाे चरणको सं’घर्षले पुग्ला जस्ताे लागेकाे छैन।
अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकमा २०१७ सालको जस्तो प्र’तिक्रान्ति ल्याउन खोजिएको पनि बताए। उनले कम्युनिष्ट पार्टीलाई कमजोर बनाउन ठूलो डिजाइन अनुसार अहिले काम भइरहेको बताए। प्रचण्डले भने,’ २०१७ सालको जस्तो प्र’तिक्रान्ति ल्याउन खोजिएको छ ।हाम्रा उपलब्धिको ह’त्या गरिएको छ, अ’प’ह’र’ण गरिएको छ। हामी म’र्दै न’मरेकालाई म’रेको भनिएको छ। जरुरी पर्छ भने जु’झारु सं’घर्षमा जानुपर्ने हुन्छ।’ उनले ७ दशकसम्म प्राप्त उपलब्धिसमेत गु’म्ने ख’तरा रहेको उल्लेख गरे। ‘हामीले ७ दशकसम्म ल’डेको ल’डाईंबाट प्राप्त गरेका उपलब्धि अ’प’ह’र’ण भएका छन्।